Edge Chromium yeLinux inoonekwa paMicrosoft Vaka 2020 | Linux Vakapindwa muropa
Maawa mashoma apfuura, Microsoft Vaka 2020 yakaitwa, musangano wesoftware wekambani inosimudzira, pakati pezvimwe zvinhu, iyo Windows inoshanda sisitimu. Mariri, zvinhu zvakakosha zvakaunzwa, zvakaita semabasa matsva muWSL (Windows Susbystem yeLinux) izvo zvichazotibvumidza kumhanya maLinux maapplication neGUI zvakananga kubva kuWindows 10. Asi izvo zvingangodaro zvinonyanya kutifadza isu vashandisi veLinux isoftware yatino Unogona kushandisa mune yedu yekushandisa sisitimu Edge Chrome.
Microsoft yakasiya pane yayo browser nguva refu yapfuura. Internet Explorer yakapa nzira kuMicrosoft Edge uye bhurawuza idzva rakatora danho mberi nekushandura injini yaro kuenda kune imwe zvichibva paChromium, iyo paInternet yatinotumidza kuti Edgium kana Edge Chromium. Kwekupedzisira Mbudzi, kambani akaitwa mukuru kusvika kwayo kuLinux, uye nezuro taigona kuzviona kumhanya pane kugoverwa kweLinux ine GNOME graphical nharaunda.
Edge Chromium iri kuuya kuLinux… asi haisati yazivikanwa
NDIKO KUTI PAMUSORO PANE LINUX ????? !!!! #MSBuild pic.twitter.com/OGL4K2vPRs
- Zhuowen Cui (@zhuowencui) Dai 19, 2020
Mufananidzo uri kutenderera pa network wakagovaniswa nemushandisi weTwitter Zhuowen Cui. Tichifunga nezvekuti bara repamusoro harisi dema zvachose, izvo zvatinogona kukuvimbisa ndezvekuti ndizvo kugoverwa kweLinux iyo inoshandisa iyo GNOME graphical nharaunda, asi zvinoita kunge isiri yeazvino Ubuntu vhezheni kana iyo bhaa ingave nhema Pamusoro pezvo, chokwadi chekuti vabvisa maapplication ese kubva kuDock hazvitibatsire kuti tizive kuti kugovera chii, chimwe chinhu chatingafungidzira kubva ku "bloatware" kana software iyo inosanganisira nekutadza.
Parizvino Edge Chromium inowanikwa chete yeWindows uye macOS pane desktop masisitimu, asi kune zvakare vhezheni yeApple uye iOS nhare. Iri kuuya kuLinux munguva pfupi zvakare, asi havasati vataura nezvazvo nanhasi. Iwe unofarira kuyedza Microsoft browser pane yako Linux kugovera kana iwe unofarira Chrome / Chromium?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Edge Chromium yeLinux inoonekwa paMicrosoft Vaka 2020
Usashandise paWindows, zvishoma pane zvese pano.
NeFirefox neChromium ini ndine zvinopfuura zvakakwana.
Chema Gemez akadaro
Parizvino ndine Chrome muDebian, asi muWin10 yebasa ini ndine Edge Chromium uye iri kufamba chaizvo. Ndichazoedza paLinux kuti ndione kuti zvinofamba sei.
Pindura Chema Gömez
Icho Ubuntu 18.04, mufananidzo wacho unopfuura pachena.
Uye kutarisira kumberi iyi paLinux.